Aragtiwanaagsan.com – Dhalin yaro sacab iyo salaan iga gudooma.
Dhalin yaro sacab iyo salaan iga gudooma.
Nov 28, 2017 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Wararka 0
Mahad oo dhan ilaahaybaa iska leh, Allaha inaga yeelay dad islaam ah,Nabigeenii suubanaana naxaris iyo nabad galyo dushiisa ha ahaato,isaga iyo ehelkiisii iyo asxaabtiisiiba.
Ugu horayn waxaan halkan uga mahad celinayaa dhamaan bahda saxaafada madaxa banaan iyo bulsho waynta reer Somaliland gaar ahaana akhristayaasha qiimaha badan.
Qaranka Somaliland waxa u soo hoyatay guul lama ilaabaan ah,waana hirgalinta doorashadii iyo tartankii xalaasha ahaa ee ay fooda isku dareen sadexda xisbi qaran, waxa qayb libaax ka qaatay dhalinyarada Somaliland oo runtii iyagu si hagar la aan ah ugu guntaday ugana shaqeeyay hawlihii doorashada.
Dhamaan dhalinyaradii u shaqaynaysay koomishanka qaranka iyo kuwii xisbiyada u shaqaynaayayba waxay muujiyeen masuuliyad taariikhi ah,dhalinyaradu waa laf dhabarta qaran ku dhismo,dawladnimadeena dadka iyagu si rasmi ah u dhisi karaa waa dhalinyaradeena muwaadiniinta ah.
Caalamka maanta xag aqooneed xag dhaqaale iyo xag siyaasadeedba dadka hogaaminayaa waa dhalin yaro cimrigoodu 40 jir ka hooseeyo,cimrigeenan gaabana dhalinyaranimadu waa marxalada ugu qaalisan,waana sababata si gaar ah aakhiro laguu waydiin doono xiligii uu jidhkaaga iyo maskaxdaaduba ugu firfircoonaa maxaad ku soo qabatay ?.
Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hambalyo aan la qiyaasi karina usoo dirayaa dhalinyaradii halyayyada ahaa ee sidii qimaha iyo quruxda badan lahayd uga qayb qaatay hirgalintii doorashadii wadankeena ka dhacday 13 november 2017.
Dhalinyaro waxaad muujiseen sidaad dacaada u tihiin una garab istaagaysan shaqo kastoo si cadaalad ah u socota.
Waxaan leeyahay hambalyo,hablo iyo inamaba dhalinyarta Somaliland howl fiican ayaad qabateen qarankana baal dahab ah ayaad ugu jiri doontaan.
Haddii aan ahaan lahaa, Madaxweynaha Cusub ee Somaliland,sidan ayaan dawladdayda cusub u soo dhisi lahaa!!!! Daawo madaxweynaha ladoortay ee jamhuuriyada Soomaliland Muuse biixi oo lakulmay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxman cirro